Ifektri yePlastiki yokuMngunda, ababoneleli-abavelisi baseTshayina bePlastiki yePlastiki
Ukuchaneka kwePlastiki yokutofa iMold
Umenzi wePlastiki oCwangcisiweyo wokuTofa ukuMbumba ochanekileyo luhlobo lokungunda oluntsonkothileyo noluxabisa kakhulu, lufuna uyilo lokungunda olugqibeleleyo, kwaye lufuna oomatshini bokwenza abachaneke kakhulu ukufikelela kunyamezelo oluchanekileyo oluphezulu, kunye nomgangatho ongqongqo womgangatho….
Izixhobo zoKhuseleko lwePlastiki lwezahlulo zombane
Umenzi weZixhobo zePlastiki
I-JS MOLD Mold yingcali enye e-China, enobuchule bayo kwi-Automotive / Daily iimfuno / izixhobo ze-electronic / zaseKhaya njl iminyaka engaphezu kwe-15, okwangoku, senza imveliso kunye namacandelo okubumba. sinikela ingqalelo epheleleyo kwinyathelo ngalinye elilandelayo ukufumana iziphumo ezilungileyo kwixabiso/ kulawulo/…
Plastic Shell Mold Factory
I-JS MOLD Mold yi-ISO 9001:2015 eqinisekisiweyo yomenzi wezixhobo zokubumba eziqinisekisiweyo, kubandakanywa nokungunda kokutofa, ukubumba iplastiki kunye nokubumba iplastiki. Izakhono zibandakanya ukubumba inaliti usebenzisa ucinezelo ukusuka kwi-45 Ton-1300ton, ukubumba oku-2 kokudubula, ukufaka ukubumba, ukubunjwa, ukwenza izixhobo, imveliso kunye nokubumba…
Umenzi wePlastiki Mold
Ukungunda kwePlastiki kwizixhobo zombane Ujongo lwemveliso: Nceda uchonge umenzi wokungunda weplastiki, onamava, olungileyo ekucwangcisweni, uninzi lwamashishini aphezulu angama-500 ehlabathi abonelela ngomngundo weplastiki.Intsebenzo ezinzileyo, efikelelekayo, eneenwele ezithe tye, umgangatho othembekileyo, unokwenziwa ngokwezifiso...
Igama leMveliso:IFactory yobuGcisa ye-OEM yePlastiki Yenziwe eTshayina yoYilo lweSoftware:I-Solidworks/PROE/UG/CAD.ETC.
Izinto zokubumba: S136/2344/718/738/NAK80/P20
Ubomi bokungunda: 100,000-300,000
Plastic Isitofu Mold For Auto Part
Amalungu aphezulu emoto kwinqwelo yomdyarho, ukungunda ukuchaneka okuphezulu kwenaliti, kusetyenziswa izixhobo zeplastiki ezikumgangatho ophezulu, kunye nokusebenza kumatshini wokutofa we-1300T. Umngundo we-JS MOLD usoloko ungoyena mthengisi uthembekileyo kubathengi bethu. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi izixhobo kunye nokubumba isisombululo!
Isitofu sePlastiki Isitofu sokungunda
Isitofu sePlastiki Isitofu sokuMbumba kwi-JS MOLD Mold: Ukusuka kulawulo loyilo, ukuhlolwa kobulukhuni bentsimbi, ukuhlolwa kwe-electrode, isiseko kunye nokuhlolwa komgangatho wentsimbi, ukuhlolwa kokufakelwa kwangaphambili, ingxelo yesilingo kunye nokuhlolwa kwesampulu, ukuhlolwa kwephakheji ngaphandle, ezilawulwa kakuhle phantsi kokubumba kwethu. …
Iplastiki yokuTofa uMngundo
Ubumba lwezindlu zeplastiki
Izinto zokubumba: 2344, 8407, P20, S7, njl.
Imveliso: Amacandelo amancinci ePlastiki Inombolo yeCavity: 1 ukuya kwi-48
Imingxunya Ubomi bokungunda: 100K ukuya ku-1
Izigidi zezixhobo zePlastiki: PTFE, PEEK, polymer, PVDF, PVC, CPVC, PPS, ETFE, polypropylene kunye nePFA njl.
Isicelo: Iinxalenye ezincinci zePlastiki yokuTofa iMold yeZithuthi,…
UkuBumba kwe-OEM yoMvelisi weSitofu
Indawo yethu yokuvelisa inaliti inebhongo ngokubonelela ngeentlobo ezininzi zeenkonzo, kuquka neenkonzo zokubumba inaliti yeplastiki, ezenziwa liqela lengingqi labasebenzi abazizityebi nabazinikeleyo. Xa ukhetha umthengisi wesiko, ii-OEMs kufuneka zingathatheli kuphela ixabiso lamacandelo azo, kodwa…
I-JS MOLD mold yaseTshayina ibonelela nge-OEM yokwenziwa kwenaliti yeplastiki yokubumba kunye nenkonzo yokubumba kwiindawo ezahlukeneyo zokudlala zeplastiki, ezinje ngeereyili, amavili, izitena ze-lego, iimoto zokudlala, iikhathuni zokudlala kwiibranki zehlabathi. kunye nomgangatho wethu wokubumba uqinisekisa umgangatho olungileyo ngaphandle kokudanyaza ukulimaza abantwana kunye nokusebenza okuphezulu kwi…